जनताको नजरबाट हेर्दापनि धेरै कामहरु भएका छन् : तिर्थ ब.लामा(वडा अध्यक्ष),रोशी–५,काभ्रे – NamoBuddha Khabar
जनताको नजरबाट हेर्दापनि धेरै कामहरु भएका छन् : तिर्थ ब.लामा(वडा अध्यक्ष),रोशी–५,काभ्रे
बुधबार, चैत्र ३०, २०७८ | ११:५७:३३ |
विं.स.२०१९ सालमा निम्न वर्गीय परिवारमा जन्मेका तिर्थ बहादुर लामा गाउँघरको समाजिक कार्यहरु गर्न रुचाउनुहुन्थ्यो । २०६१ सालमा स्थानीय विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष भएर शैक्षिक सुधार,२०६३ सालमा सिसाखानी लुर्पुङको १० किलोमिटर मुख्य गोरेटो बाटोलाई ब्यबस्थित गरी जनतालाई सडक यातायातको पहुँचसँग जोडेर सामाजिक क्षेत्रमा लागेका लामा राजनीतिमा भने २०५४ तिरै आबद्ध हुनुहुन्थ्यो ।
नेपाली जनताको सार्बभौमसत्ता,राज्यको पुर्नसंरचना एवं संघीयताको सुनिश्चिततासँगै आर्थिक,सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने संविधानको मर्म अनुरुप २०७४ बैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव भयो । काभ्रेको रोशि गाउँपालिका वडा नं ५ मा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेद्वार भएका लामा अत्याधिक जनमतका साथ वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
सरकारले दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा विकास निर्माणको दृष्टिले स्थानीय तहमा यो ५ वर्षमा के परिवर्तन आयो ? कति सम्भव रह्यो ? यसबारे छलफल वहसहरु हुन थालेको छ । यसैक्रममा रोशी ५ का वडा अध्यक्ष लामासँग नमोबुद्ध संवाददाता लोक बहादुर लामाले संवाद गर्नुभएको छ ।
तपाई आफैँले स्थानीय जनताको ठाउँमा बसेर हेर्नु पर्दा यो ५ बर्षलाई कसरी लिनु हुन्छ? सरसर्ती हेर्दा सडक यातायातको क्षेत्रमा बढि केन्द्रित हुनुभयो कि ?
हो,म अहिले जनप्रतिनिधि भएता पनि पहिलो कुरा म आफैँ पनि यहाँको स्थानीय नै हो । जनताको नजरबाट हेर्दा पनि निकै कामहरु भए छ्न । जसमा मुख्य रूपमा त्यो हाम्रो ठाउँको पहिलो आवश्यकता भौतिक पूर्बाधार नै हो । त्यसकारण हामीले दोभान हुँदै लुर्पुङ दोकर्पा सम्मको मोटार बाटो र संघीय सरकार सँगको सहकार्यमा ज्योती मार्ग स्तर उन्नति गर्यौं । त्यसै गरि दोकर्पा थनापति माटे हुँदै ताराखासे लेक सडक करीव ८ कलिोमिटर,दोकर्पा माटे ५किमि,सेलगाउँ सनिखोला २ किमि,ह्वाराखेप्पाबाट घट्टखोला ८किमि,दोकर्पा सिग्देल ६ किमि र थाम बतासे डेढ किमि नयाँ सडक खन्ने काम गरियो ।
त्यसै गरि मुख्य २ वटा मोटर बाटो पोटाखोला लुर्पुङ दोकर्पा र ज्योति मार्गको डिपिआर भयो । हाम्रो मुख्य ब्यापारिक केन्द्र बनेपाबाट सिधा लुर्पुङ हुँदै माटे सम्म बस सेवा सञ्चालन गर्न सफल भएका छौं । अरु थुप्रै क्षेत्रमा पनि ध्यान पुर्याएका छौं ।
त्यसो भए स्वास्थ क्षेत्रको कुरा गरौं,एम्बुलेन्स सञ्चालनका कुरा पनि सुनिन्छ,वास्तवमा यो क्षेत्रमा के कस्तो सुधारको प्रयास भयो नि ?
हाम्रो भौगोलिक अवस्थाले गर्दा गाडीको सजिलै उपलब्धता छैन,यसैलाई मध्यनजर गरेर अहिले हामीले वडा बाट नै एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेका छौं । भुकम्पबाट क्षति भएको स्वास्थ चौकीलाई अस्थायी टहरा बनाई सञ्चान गरेको छु । संघ सरकारको सहयोगमा बर्थिङ सेन्टर समेत बनाउन योजना अनुसार अहिले साढे २ तलाको ६कोठे पक्की भावन सुरु भएको छ । हामीले स्वास्थ बिमाको कामलाई पनि अगाडि बढाएका छौं । मासिक घुम्ती स्वास्थ शिबिर पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौं ।
तपाई आफैँ पनि बिद्यालय ब्यबस्थापन समितिको अध्यक्ष भइसक्नु भएकोले शिक्षा क्षेत्रको विकासमा त सहजता आयो कि ?
हो,मैले २०६१ सालमा भुमेस्थान निमाविको ब्यबस्थापन समितिको अध्यक्ष भएर काम गरेँ जुन बेला गाउँमा बिद्यालयको ब्यबस्थापन राम्रो नहुदा गाउँका सानो नानिबाबुहरु ३/४ घन्टाको बाटो हिडेर माटे,सिपाली,कटुन्जेसम्म जानु पर्ने बाध्यता थियो । कति बालबालिका त बिद्यालय नै जादैन थिए । मैले ब्यबस्थापन समितिमा बसेर काम गर्न थालेपछि सबै विद्यार्थीहरु फर्केर आएका थिए,अहिले त झनै राम्रो हुँदै आएको छ । अहिले यहाँका बालबालिकाले मावि सम्मको अध्ययन गर्न पाउँछन् ।
अहिले हामीले शिक्षा नै बिकासको प्रमुख आधार हो भन्ने हिसावले वडा भित्रका सबै विद्यालयलाई ब्यबस्थित गरेका छौँ । एउटा विद्यालयमा त बाह्य भाषाको प्रभावले हाम्रो मातृभाषाको लोप हुँदै गरेको अवस्था देखेपछि तामाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको भुमेस्थान माविमा यो वर्षदेखि मातृभाषामा पठनपाठन थालेका छौं । व्यवहारीक शिक्षामा जोड दिनेक्रममा कम्प्युटर शिक्षालाई पनि जोडदै गएका छौं ।
गाउँमा रोजगारी नहुदा युवाहरु गाउँ छाडेर शहरतिर जानुपर्ने अवस्थामा युवाहरुलाई गाउँ मै टिकाउन के योजना आएन ?
हामीले युवाहरुले आफ्नै ठाउँमा केहि गरुन् भन्ने हिसाबले गाउँपालिकासँग मिलेर सहुलियत ब्याजदरमा व्यवसायका लागि ऋण अनुदान दिएका छौं । विभिन्न व्यावसायिक फार्म खोलेर ब्यबसाय गर्न सल्लाह सुझाव दिने र फार्म दर्ता गरेर काम गर्दा हुने फाइदाको बारेमा सल्लाह,आवश्इक तालिम दिने गरेका छौ । विभिन्न जातका बहुबर्से फलफुलका बिरुवा वितरण गर्ने,बालीमा लाग्ने रोगको औसधि वितरण गर्नुका साथै पशु र बालीवज्ञ समेत राखेका छौं ।
पशुपालन गर्ने किसानहरुलाई उन्नत जातको घास वितरण गरेका छौं,महिलाहरुका लागि सिलाईबुनाई तालिम दिएका छौं । गाउँमा उत्पादन हुने फलफूल ,तरकारी बजारसम्म ल्याउन सजिलो होस् भनेर पोठाखोला र घट्टखोलामा तरकारी तथा फलफूल संकलनबाट केन्द्र निर्माण गरेका छौं । सिञ्चाईका लागि छाप,लुर्पुङ वेशीमा काम हुदैछ । म्हाने गाउँमा करिब १ लाख लिटरको सिञ्चाइ पोखरी निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छौं ।
खानेपानीको समस्यालाई कसरी ब्यबस्थापन गर्नु भएको छ त ?
पछिल्लो समय २०७२ को भुकम्प लगायतका कारण धेरै ठाउँको पानीका मुहान सुकेर खानेपानीको धेरै समस्या देखियो । हामीले अहिले सानिखोलाबाट लिफ्टिङ मार्फत सेलगाङ , लुर्पुङ गोन्पोगाङ करिब २ सय घर धुरीलाई खानेपानीको ब्यबस्था गर्ने काम शुरु भएको छ । लुर्पुङ वेशी दिप्साको करिब १०० घर धुरीलाई पनि रोशी खोलाको पानी लिफ्टिङ मार्फत ब्यबस्थापन गर्ने काम शुरु भएको छ । वडा भरिमा नयाँ खानेपानी टयाङ्कि ८वाट निर्माण सम्पन्न भैसकेको छ । यसका साथै यो वडामा फोहोर ब्यबस्थापनको लागि लुर्पुङमा ढल ब्यबस्थापन काम भइसकेको छ ।
स्थानीय संस्कृति प्रवद्र्धनका साथै धार्मीक,पुरातात्विक सम्पदा संरक्षण,मर्मतसम्भारको पाटोमा के उपलब्धि देखिए त ?
हाम्रो संस्कृति सभ्यताको संरक्षण प्रवद्र्धनका कामलाई पनि हामीले नजिकबाट हेरेका छौं । २०७२ को भुकम्पले क्षतिपुर्याएको म्हानेको पुनःनिर्माण गरिसकेका छौं । यहाँ भएका अरु गुम्बाहरुको मर्मत भइसकेको छ । ॐ बुद्ध छ्योलिङ गुम्ब निर्माणको क्रममा छ । दोकर्पामा सत्तल निर्माण गरेका छौं भने दहासंस्कार गर्न वडाका स्थानीय च्यान डाँडाहरुमा पाटि निर्माण कार्य सम्पन्न भैसकेको छ । स्थानीय तामाङ समुदायको पर्व विशेषगरी ल्होछार मनाउन बिदा दिन कार्यपालिकाका महत्वपूर्ण भुमिका खेलेर यो उपलब्धि हाँसील भएको छ भने आफ्नो मौलिक भाषा,संस्कृति संरक्षण,पूर्वद्धनका लागि मनाऔं अभियान जोडेर एक खालको जागरण नै ल्याएका छौं ।
अन्त्यमा तपाईको कार्यकालमा भएका यी बिकास निर्माण,प्रगाती,प्रयासबाट तपाई कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
जनतासँग जोडिएका अधिकांश कामहरु शुरुवात भएको छ,धेरै सम्पन्न भइसकेको छ । यसकारण धेरै सन्तुष्टिका बीचमा केहि असन्तुष्ट पनि छ । पर्याप्त बजेट नुहुनु र भौगोलिक कठिनाई जस्ता चुनौतीहरु पनि देखिए ।
संघीयतापछि निर्वाचित भएको हामी पहिलो जनप्रतिनिधि हौं । सबैभन्दा पहिले त यसको व्यवहारीक कार्यन्वयनमा धेरै छलफल,वहस र नीति,निर्माणका कामहरु गर्नुपर्यो । त्यसपछि हाम्रा योजना,बजेट अनि कार्यन्वयनको कुरा रह्यो । यो अवस्थामा पनि हामीले स्थानीय क्षेत्रमा बलियो जग बसालेका छौं । वाचा गरेका अधिकांश काम पूरा गरेका छौं ।
संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद ।
हाम्रो नेतृत्वमा रोशी गाउँपालिका वडा नं. ५ मा भएका विकास निर्माण,योजना र हाम्रो प्रयासबारे जनतामाझ जोडिने मौका दिनुभएकोमा तपाईंलाई पनि धन्यवाद ।